REBS गर्भावस्थाको कारण र समाधानहरूमा चोट पुर्याउँछ
यो थियो, म सामान्यतया 1 16 हप्ता पछि खान सक्दिन, सबै जताततै थिई। र डाक्टर अन्त्यमा ठीक छ त्यसैले उठ्छ, र त्यसो भए पनि कुनै पनि हिसाबले बस्न असम्भव छ।
उही समस्या 311 हप्ता भयो (2 29 बाट सुरु भयो)। बिहान म लड्न क्लब पछि जगाएँ। तपाईं सिधै बस्न सक्नुहुन्छ, मानौं मोटो निलियो। हो, एक अधिक केटी टाउको रिब मा विश्राम, त्यसैले यो पक्षमा सुत्न असम्भव छ। "बच्चाहरूसँग लडाई" हुनेछैन, यदि तिनीहरू सहज थिए भने। होल्ड गर्नुहोस्!
<< p> मेरो मिति छ तपाईंको म्यादहरू पसलहरू रोप्न थाल्यो, तर एकातिर मात्र। मसँग जुम्ल्याहा छैन। तर डरलाग्दो चोटपटक। झूट बोल्न, हिंड्न, हिड्नुहोस्, स्नीनेट स्कीट गर्न सकेन - सबै अवास्तविकमा! यो एक हप्ता चल्यो जब सम्म म कुनै नभएसम्म माबेकमा सुतेको र सबै कुरा। । । । त्यहाँ मनपर्ने केहि र म यो स्थिति मा रहे। । । म विचित्रको लागि कुँदिएको छु! म धेरै रोइरहेछु! म केहि गर्न सक्दिन! म एक न्यूरोलोजिस्टमा पहिलो पटक भाग्यमानी थिएँ, तर उनले भनिन् कि यो अन्तरालस्टल न्यूराजिया होइन (मेरुदण्डको दुखाई)। हामी सर्जन गयौं।
सहन गर्नुहोस्। मलाई पछाडि तर्काउन र सुत्न, हात रन गर्न, र त्यसैले यो केवल सुरुवात छ, यहाँ shows को अन्त मा सबै कूलमा आउनेछ। होल्ड गर्नुहोस्))))))))))
विभिन्न दुर्घटनामा, यदि भविष्यमा आमाले सुरक्षा नियमहरूलाई बेवास्ता गरे र बेल्टलाई जोगाएनन्। गर्भवती महिलाका लागि विशेष सीट बेल्टहरू छन् जसले फललाई थिचेनन् र धम्कीउँदैनन्। साथै, यदि भविष्यमा आमा आमाले गाडी ढकढक्याए भने। यी दुबै मेकानिकल प्रभावहरू भविष्यको आमा र भ्रूणको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त खतरनाक छन्।
जब यसको आफ्नै विकास वा उच्चको उचाईबाट झर्छ। भविष्यका आमाहरू गर्भावस्थाको ठूला साम्राज्यहरूमा थोरै बन्छन्, त्यसैले कहिलेकाँही तिनीहरू गल्तिले मूर्ख र खस्न सक्छन्। यदि तपाईंसँग केही बेवकूफ वस्तुमा खस्दै गर्भवती छ भने, यसले सजिलै रिबलाई तोड्न सक्छ।
केही प्राकृतिक प्रकोप वा आपतकालमा परिणामहरूको रूपमा। गर्भवती महिला दुबै पक्षमा संलग्न भएकोले वा स्यान्डविच गरिएको छ, यो पसलहरूलाई हटाउनुपर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। मेकानिकल प्रभाव बिना, वा न्यूनतम प्रभाव शक्तिको साथ। प्राय: जसो फ्रैक्चर, भावी आमा जन्मकी आमा जन्मकी आमाले अटोमोनेमने रोगबाट पीडित हुन्छन् भन्ने तथ्यको परिणामको रूपमा प्राप्त गरिन्छ। या त उनी ओस्टोफोरोसिस वा हड्डीहरूको आर्थ्रोसिस हुन्। गर्भावस्थामा उल्लेख गरिएझैं, भविष्यमा थोरै क्याल्सियम छ कि भविष्यमा सानो सानो क्याल्सियम छ कि त्यहाँ खाद्यान्नको लागि किनल पदार्थको त्यो आरक्षित भक्तिको पूर्ण गठनमा जान्छ। सबै भन्दा खतरनाक घटनामा, एक गर्भवती महिला को एक prs को फ्रैक्चर एक परिणाम हड्डी मज्जा, हड्डी टिश्यु को क्यान्सर ट्यूमरको परिणाम हुन सक्छ। / LI>
गर्भवती कुनै पनि महिलाको लागि गर्भावस्था भनेको एक कडा लोड हो। भविष्यको शरीरले पोषक कुकको कमीको आपूर्तिको अभाव हुन सक्छ, त्यसकारण दुराचरणले घट्नेछ, जब भविष्यको आमाको ठूलो पेट छ, जब यो सर्न सकिन्छ यो स .्केत गर्न सकिन्छ । जे भए पनि, सबै गर्भवती महिलाहरू गर्भावस्थामा थोरै भद्दा हुन्छन्। केहि केसहरूमा, भविष्यमा आमाले पसलहरू वा एउटा रिबरको फ्रैक्चर हुन सक्छ र छातीमा नोक्सानको परिणामको रूपमा।
दुखाई छातीमा दुखाइ, जब भविष्यमा आमाले सास फेर्नु हुन्छ वा सर्छ। सबै प्रयासहरू तीव्र दुखाइको साथ सर्छन्।
फ्र्याक्चर क्षेत्रमा हेमतामाको उपस्थिति, छाला चिप्लन र कडा सूजन सुरु हुन्छ। यदि हावा छाला केक अन्तर्गत भयो भने, त्यसपछि "बुलबुले"
भोग्नुपरेको पीडाको साथ बन्न सक्छ र भविष्यको आमाले समात्छ ती पसलहरू हातमा दबाब कम गर्न र कसरी "राज्यको सुविधाजनक छ, श्वासप्रश्वासको गतिको गतिलाई कम गर्ने क्रममा जब पसलहरूको किनारले ब्रोन्चीलाई क्षति पुर्याउँछ। यसका कारण, अक्सिजनको कमीको कारण, सास फेर्नको कारण। / LI> :
भविष्यका आमाहरू विचलित छन् कि बच्चाले पसलहरू भत्काउन सक्दैनन्। यद्यपि यो शारीरिक रूपमा सम्भव छैन। गर्भावस्थाको बखत पसलहरूको फ्रैक्चरहरूको लक्षणहरू निम्न समावेश छन्:
यद्यपि, केहि केसहरूमा, केटीले याद गर्न सक्दछ कि यसले किनारालाई दायाँ वा गर्भावस्थामा बायाँ चोट पुर्याउँछ। यस्तो संकेतले प्राय: जहिले पनि भविष्यको आमाको शरीरमा dyspuncuncuncuncuncunce को लागि बुँदा, विशेष गरी यदि पीडा धेरै बलियो छ, र यसको तीव्रता पर्याप्त लामो छैन। यस लेखमा हामी तपाईंलाई गर्भावस्थामा किन चोटपटक र आफ्नो अवस्थाको सुविधाका लागि के गर्ने भनेर बताउँछौं।
तपाईलाई थाहा छ, सम्पूर्ण गर्भावस्थाको अवधिमा, गर्भाशय निरन्तर बढ्दो अन्तरिक्षको विकास र सामान्य जीवन गतिविधिको लागि आवश्यक ठाउँ सुनिश्चित गर्न बढ्दै गइरहेको छ। ग्रेजिंग गर्भाशयले छिमेकी अ orgs ्गलाई उसको ठाउँबाट विस्थापन गर्दछ र तिनीहरूलाई सार्दछ। स्वाभाविक रूपमा, यी सबै आन्दोलनहरूले निश्चित असुविधाको कारण दिन्छ, परिणाम स्वरूप भविष्यको आमाले पीडा महसुस गर्न थाल्छ।
बच्चाको आगमन अघि तुरून्तै, तपाईंको पेट खस्नेछ, र दुखाइ पन्छाएर बच्चा जन्माएपछि मात्र बाहिर निकाल्नेछ।
दुर्भाग्यवस, यो अवस्था सँधै यस्तो हानिविहीन कारणहरूले गर्दा हुँदैन। केहि केसहरूमा असुविधाले भित्री अंगहरू, साथै अन्तर्राष्ट्रिय न्यूरोसाललाई उक्साउँदछ। लोकप्रिय विश्वासको विपरित, एकै समयमा गर्भावस्थाको बखत NESTESSESTES ACTERSED अक्सर रिब पछाडि चोट पुर्याउँछ, र अगाडि छैन।
यस रोगको विशेषता र अन्य लक्षणहरू अन्तर्निहित यस रोगको अन्य लक्षणहरू बृद्धि हुन्छ जब स्थिति परिवर्तन हुन्छ, साथै एक बिन्दुको स्पष्ट परिभाषा फैलाउँदछ। उचित निदानको लागि उपचारको लागि, डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
गर्भावस्थाको समयमा दर्दनाक संवेदनाहरूको अभिव्यक्ति लामो समयदेखि होइन, तिनीहरू मध्ये केही धेरै सामान्य र स्पष्ट रूपमा विचार गरिन्छ। खैर, तपाईं जहिले पनि अलम्बन गर्न सक्नुहुन्न जब त्यस्ता परिवर्तनहरू भित्र हुन्छ! यदि तपाईं नियमित रूपमा निरीक्षणहरू पार गर्नुभयो भने, परीक्षण लिनुहोस्, सबै सामान्य छ र तपाईंको डाक्टरले गर्भावस्थाको सामान्य मार्गमा तपाईंलाई बधाई दिलाए भने, तपाईं थोरै समस्याको बारेमा चिन्ता लिनु हुँदैन।